Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း)
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ကဘာလဲ။
နှလုံးကြီးခြင်း ဆိုတာ နှလုံးကို X-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါ နှလုံးအရွယ်အစား ကြီးနေခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ နှလုံးကြီးနေပြီဆိုတာနဲ့ အတည်ပြုဖို့ အခြားစစ်ဆေးချက်တွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးကြီးတယ်ဆိုတာ ရောဂါတော့မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကာလကြာရှည် သွေးရောဂါနဲ့ လည်ပင်းသိုင်းရွိုက်ဂလင်း ရောဂါတွေနဲ့တော့ ယှဉ်တွဲနေတတ်ပါတယ်။
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးတိုးရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာ နှလုံးကြီးတတ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေထက် လူကြီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဘေးဖြစ်နိုင်သည်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားခြင့် နှလုံးကြီးနိုင်ခြေကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ
နှလုံးကြီးတာဟာ အချို့မှာ လက္ခဏာ မပြပါဘူး။ အချို့မှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးစည်းချက် မမှန်ခြင်း
အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ လက္ခဏာတစ်ခုခု ပြနေပြီးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါပြီ။
နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ရောဂါလက္ခဏာ အသစ်တွေ ပြနေပါက ဆရာဝန် ပြသင့်ပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အောက်ပါ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးပေါ်ဆေးကုသဖို့ ရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်။
• ဆိုးရွားစွာ အသက်ရှုမဝခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှလုံးကို အလုပ်ပိုလုပ်စေသော အရာများ၊ နှလုံးကြွက်သား ပျက်စီးစေသောအရာများ စသော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် နှလုံးကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မွေးရာပါ နှလုံးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူတွေ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဖူးတဲ့ လူတွေ၊ ပုံမှန်မဟုတ် နှလုံးခုန်ခြင်း မရှိတဲ့လူတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင် ချင့်ချိန်စဉ်းစားနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• သွေးဖိအားများခြင်းက ဘယ်ဘက် သွေးလွှတ်ခန်းကို ကြီးလာစေပါတယ်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းက နှလုံးကြွက်သားတွေကို အားနည်းလာစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခန္ဓါကိုယ်ကို သွေးရောက်ဖို့ နှလုံးကပိုပြီး အားစိုက် အလုပ်လုပ်ရလို့ပါ။ ဒါအပြင့် နှလုံးရဲ့ သွေးဝင်ခန်းတွေကိုလည်း ကြီးလာစေပါတယ်။
• နှလုံးအဆို့ရှင်ချို့ယွင်းနေခြင်း။ သွေးစီးဆင်းနေတာကို ထိန်းသိမ်းဖို့ နှလုံးမှာ အဆို့ရှင်လေးခုရှိပါတယ်။ သွေးလေးဖက်နာ ရောဂါ၊ နှလုံးချို့ယွင်းချက်များ၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ တွယ်ဆက်တစ်ရှုး ရောဂါများ၊ အချို့ဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည် ကင်ဆာ ကုထုံးတွေက အဆို့ရှင်တွေကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့်ပဲ နှလုံးကြီးလာပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးကြွက်သားရောဂါတွေကြာင့် ခန္ဓါကိုယ်ကို သွေးရောက်ဖို့ နှလုံးက အလုပ် ပိုလုပ်ရသော အခါ နှလုံးကြီးလာတတ်ပါတယ်။
• နှလုံးဖုံးအမြှေးပါးတွင်း အရည်ဖုံးခြင်း ။ နှလုံးဘေးပတ်လည်မှာ အရည်တွေ ဝန်းရံစုပုံလာခြင်းကြောင့်ပဲ X-ray ဓါတ်မှန် မှာ နှလုံးဟာကြီးနေတတ်တဲ့ပုံ ပေါ်တတ်ပါတယ်။
• သွေးနီဥ ပမာဏ နည်းနေခြင်း။ သွေးအားနည်းရောဂါဆိုတာ တစ်ရှုးတွေကို အောက်စီဂျင် အလုံအလောက် ပို့ပေးဖို့ ကျန်းမာတဲ့ သွေးနီဥ ပမာဏ အလုံအလောက် မရှိခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ မှန်ကန်ထိရောက်စွာ မကုသပါက နှလုံးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်း၊ မြန်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ နှလုံးက လုံလောက်တဲ့ အောက်စီဂျင်ကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ပိုမို အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နှလုံးကြီးလာနိုင်ပါတယ်။
• သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရောဂါများ။ သိုင်းရွိုက် ဂလင်း ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ခြင်း (Hypothyroidism) ၊ သိုင်းရွိုက် လိုတာထက် ပိုအလုပ်လုပ်နေခြင်း ( Hyperthyroidism ) တို့ကြောင့် နှလုံးကြီးခြင်းအပါအဝင် အခြားသော နှလုံးရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• ခန္ဓါကိုယ်တွင်း သံဓါတ်များနေခြင်း။ Hemochromatosis ဆိုတာဟာ ခန္ဓါကိုယ်က သံဓါတ်တွေကို ကောင်းကောင်း မစွန့်ထုတ်နိုင်ပဲ နှလုံးအပါအဝင် အခြားသော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေမှာ သွားပုံနေတဲ့ အခြေအနေပါ။ ယင်းအခြေအနေကပဲ နှလုံးကြွက်သားတွေကို အားနည်းစေပြီး ဘယ်ဘက် သွေးလွှတ်ခန်းကို ကြီးလာစေပါလိမ့်မယ်။
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နှလုံးကြီးနိုင်ချေကို မြင့်မားစေတဲ့ အရာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• သွေးတိုးခြင်းက နှလုံကြီးနိုင်ခြေများစေပါတယ်။
• မိဘဆွေမျိုးတွေထဲမှာ နှလုံးကြီးတဲ့သူတွေ ရှိနေပါကလည်း နှလုံးကြီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းများပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေမှာ အဆီခဲတွေက သွေးစီးဆင်းခြင်းကို ပိတ်ဆို့နေတတ်တာကြောင့် နှလုံး သွေးကြောပိတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ နှလုံးကြွက်သားအချို့ သေဆုံး သွားတဲ့အခါမှာ သွေး အလုံအလောက်ရစေဖို့ နှလုံးက ပိုအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
• မွေးရာပါနှလုံးရောဂါတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးကြီးနိုင်ခြေများပါလိမ့်မယ်။
• Aortic ၊ mitral ၊ pulmonary နဲ့ tricuspid ဆိုပြီး နှလုံး အဆို့ရှင်လေးခုရှိပါတယ်။ နှလုံးကို သွေးပုံမှန် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေဖို့ ယင်းအဆို့ရှင်တွေက ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် လုပ်ပေးကြရပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင် ရောဂါတွေကြောင့် နှလုံးကြီးလာတတ်ပါတယ်။
• နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ အခံရှိတဲ့ လူတွေမှာလည်း နှလုံးကြီးနိုင်ခြေများပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ဆေးပညာအကြံပေးမှုနေရာတွင် အစားထိုးရန်မသင့်တော်ပါ။ ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ။
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• သင့်အခြေအနေကို သိရှိစေဖို့ ပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးချက်များဖြင့် ရင်ဘတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ X-ray ၊ နှလုံး ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT) ရိုက်ခြင်းနှင့် သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (MRI) များက အလုပ်များတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်တွေပါ။
• Electrocardiogram (အီးစီဂျီ)။ အီးစီဂျီကတော့ လျှပ်စစ်ခေါင်းလေးတွေကို အရေပြားမှာ တပ်ဆင်ပြီး နှလုံးလျှပ်စီးကြောင်းတွေကို မှတ်တမ်း တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်က နှလုံးစည်းချက်မမှန်တာတွေနဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေကို ဆရာဝန် သိရှိနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
• Echocardiogram ( အက်ခိုးရိုက်ခြင်း ) ။ အက်ခိုးရိုက်တယ်ဆိုတာက အသံလှိုင်းတွေနဲ့ နှလုံးကို ရိုက်ခတ်စေပြီး ပုံဖော် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်နဲ့ပဲ နှလုံးရှိ အခန်းလေးခန်းကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
• နှလုံး ခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်း (သို့) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် နှလုံးစမ်းသပ်ခြင်း (Stress test) က ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြု နေစဉ်မှာ သင့်နှလုံးဟာ ဘယ်လောက်ထိ အလုပ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။ ယင်းစမ်းသပ် စစ်ဆေးချက်ကတော့ လမ်းလျောက်စက် ပေါ်မှာ လမ်းလျောက်နေစဉ် ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးစက်ပေါ်မှာ နင်းနေစဉ်အတွင်းမှာ နှလုံးစည်းချက်၊ နှလုံးဖိအားများနဲ့ အသက်ရှုခြင်းတို့ကို တိုင်းတာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• သွေးလည်း စစ်ရပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးအတွင်းသို့ ပိုက်ထည့်ခြင်းနှင့် အသားစယူခြင်း။ အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ ပေါင်ခြံကနေ နှလုံးထိ သွေးကြောတွေကို ဖြတ်ပြီး ပိုက်သေးသေးလေး ထည့်လိုက်တာပါ။ ပြီးနောက် အသားစကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ ယူလိုက်ပါတယ်။
Cardiomegaly (နှလုံးကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှလုံးရောဂါတွေကြောင့် နှလုံးကြီးနေမယ် ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကအောက်ပါ ဆေးဝါးတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
• ဆီးဆေးတွေက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ရေဓါတ်နဲ့ ဆားဓါတ်တွေကို လျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့် နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေပေါ်မှာ သက်ရောက်နေတဲ့ သွေးဖိအားတွေကို လျော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။
• ACEI (Angiotensin –converting enzyme inhibitor) ဆေး တွေကလည်း သွေးတိုးကျစေပါတယ်။
• ARB (Angiotensin receptor blockers) ဆေး တွေက ACEI မသောက်နိုင်တဲ့ လူတွေအတွက်တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။
• Beta blockers တွေက သွေးတိုးကျစေပြီး နှလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုကောင်းပါစေလိမ့်မယ်။
• Digoxin ဆေးက နှလုံးရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်စေပြီး ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
• သွေးကျဲဆေးတွေကလည်း သွေးခဲနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း လေဖြတ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးစည်းချက်ထိန်းဆေးတွေကလည်း သင့် နှလုံးစည်းချက်မှန်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
• ဆေးဝါးနဲ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုအပ်ပါပြီ။
• နှလုံးခုန်မှန်စေဖို့ စက်ထည့်ခြင်း။ အချို့ နှလုံးကြီးခြင်းများ (နှလုံးကျယ်နေခြင်း) အတွက် ညာဘက်နဲ့ ဘယ်ဘက် နှလုံးခုန်တာကို လိုက်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Pacemaker ဆိုတဲ့ နှလုံးစက် တစ်မျိုးလိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နှလုံးစည်းချက်မမှန်သူတွေအတွက် ကတော့ Implantabe Cardioverter-defrillator (ICD) ပစ္စည်း ထည့်သွင်းထားဖို့ သို့မဟုတ် ဆေးတွေသောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
• ICD ဆိုတာ နှလုံးထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး နှလုံးရဲ့ စည်းချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ နှလုံးရဲ့မူမမှန်တဲ့ စည်းချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုတဲ့အခါမှာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွေကို ပို့လွှတ်ပေးတဲ့ စက်လေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစက်ငယ်လေးက Pacemaker အဖြစ် လုပ်လုပ်ပါတယ်။
• Atrial fibrillation (နှလုံးစည်းချက် မမှန်ခြင်း၊နှလုံးခါခြင်း) ကြောင့် နှလုံးကြီးနေမယ်ဆိုရင် နှလုံးက နဂိုစည်းချက်အတိုင်း ပြန်ခုန်နေဖို့ လိုသလို နှလုံးခုန် မမြန်နေစေဖို့လည်း လိုပါတယ်။
• နှလုံးအဆို့ရှင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ နှလုံးအဆို့ရှင်တစ်ခုခု မကောင်းလို့ နှလုံးကြီးနေမယ်ဆိုရင် ယင်းအဆို့ရှင်ကို ဖယ်ထုတ်ကာ လူလုပ် အဆို့ရှင်၊ ဝက် ၊ နွား သေဆုံးသွားသော လူတို့မှရရှိသော အဆို့ရှင်တို့ဖြင့် အစားထိုးခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• Coronary artery bypass surgery ။ နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေကြောင့် နှလုံးကြီးနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေက Coronary Artery Bypass Surgery (နှလုံးသွေးထောက်ပံ့မှု ရရှိရန် ပိတ်ဆို့နေသော သွေးကြောအစား ကောင်းမွန်သော သွေးကြောနှင့် အစားထိုး လမ်းကြောင်းလွှဲသော ကုသမှု) လုပ်ဖို့ အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
• ဘယ်ဘက်သွေးလွှတ်ခန်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသော ပစ္စည်း (LVAD) ။ နှလုံးကြွက်သားပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးရဲ့ အားနည်းနေတဲ့ ညှစ်အားကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ စက် ထည့်သွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Left Ventricular Assist Device (LVAD) ထည့်သွင်းထားခြင်းအားဖြင့် နှလုံးအစားထိုးကုသနိုင်ရန် အချိန်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအစားထိုးကုသဖို့ မဟုတ်ရင်လည်း LVAD က နှလုံးကို အချိန်အကြာကြီးအထိ ကုသပေးထားနိုင်ပါတယ်။
• နှလုံးအစားထိုးကုသခြင်း။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကုသလို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ နှလုံးအစားထိုးကုသခြင်းက နောက်ဆုံးရွေးချယ်ခြင်းပါပဲ။
Enlarged Heart (Cardiomegaly). http://www.webmd.com/heart-disease/guide/enlarged-heart-causes-symptoms-types. Accessed July 22, 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပြီ 9, 2018